Tilal Liwa အပန်းဖြေစခန်းရှိအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခု | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွား Samriddhi Bajpai Shukla
Tilal Liwa Resort ကိုမှာတစ်ဦးကရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့
Samriddhi Bajpai ရှက်
Nabh & မေမေ
နေ့တိုင်း is သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်အတူသင်ယူ
ချစ်ခြင်းမေတ္တာအာရေဗျသဲကန္တာရ၏လေထုထဲတွင်ဖြစ်တဲ့အခါ: Tilal Liwa မှာတစ်ဦးကရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့
ယူအေအီး၏ဤဆန်နီပွညျ၌ဆောင်းရာသီအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေရကျိုးနပ်တစ်ခုခုဖြစ်ကြသည်ရာသီဥတုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည် & သင်ဝေဒနာတွေမှတစ်ဦးအေးမြလေပြေအမြဲရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ၏အတော်လေးအေးစိတျအပိုငျးမြားမှလူတို့အဘို့, ကနွေရာသီနဲ့တူပုံရပေမည်နှင့်အနောက်နိုင်ငံသည့်ကမ်းခြေများပေါ်မှာ sunbath ခံစားရှုမြင်ကြသည်, သဲကန္တာရ Safaris ခံစား ဤအခုနှစ် အာရေဗျသဲs.
မှာတစ်ဦးကရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့ Tilal Liwa Resort ကို
ကျွန်မခင်ပွန်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသဲခုံအနီး Tilal Liwa ဟိုတယ်တစ်ခုအလည်အပတ်ခရီး, နှင့်ငါ့ကိုအံ့သြသည့်အခါဒါဟာအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုခဲ့ ... THE LIWA အိုအေစစ်။
ယူအေအီးအတွက် #expats ဖြစ်ခြင်း, ငါတို့များသောအားဖြင့်တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း၏အေးစိတျအပိုငျးအတွက်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ staycations စီစဉ်ထားပေမယ့် Liwa ခုံ၌ဤအရာ၌ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်မနည်းပါ! သင်သည်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအရပ်မှဖြစ်မလာကြလျှင်, ကန္တာရအပန်းဖြေသင်ဤရာသီများအတွက်ဆောင်းရာသီတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။
နောက်ဆုံးဆောင်းရာသီကျွန်တော်တစ်ဦးသင့်လျော်အားလပ်ရက်များအတွက်မသွားနိုင်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအရမ်း #UAEexpats ကြားတွင်အရာတစ်ဦးဖြစ်သည့်တစ်ဦး #staycation ဘို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Danat ဟိုတယ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦးရင်ခုန်စရာအထုပ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နှင့်ကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် .. !!! ဒါဟာတစ်ချိန်တည်းမှာအာရေဗျဇိမ်ခံ, အပန်းဖြေ & ပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများများ၏ခံစားမှုနှင့်အတူတင်ဆောင်နေပဲ! အဘယ်ကြောင့်သိရန်အပေါ် more ...
ငါ့အသားနဲ့ငါဆိတ်ကွယ်ရာ4ရက်ပေါင်းမွေးနေ့ဆင်နွှဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးမှကျွန်မခင်ပွန်းထံမှအထူးဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အခန်း၏အလင်းရောင် & ပုံစံမျိုးပဲစုံလင်ခြင်းရှိ၏, တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ချောကလက် fudge ကိတ်မုန့်နှင့်တကွ & အိမ်သူအိမ်သားရှန်ပိန်အတွက်ကြိုဆိုကြသည်!
အခန်း Tilal Liwa Resort ကိုမှာ ပဲစုံလင်ခြင်းရှိ၏,
အခန်းထဲမှာအားလုံးကျော်နှင်းဆီပွင့်ချပ်တွေနဲ့အလှဆင်ခဲ့ပါတယ်, ဒီအထုပ်အမှန်ပင်၏အနံ့လန်းဆန်း, သင်၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်၏လက်သုတ်ပဝါအနုပညာနှင့်ဖွဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာငှက်တို့သည်သင်တို့ကိုသတိပေးမယ်လို့ oud ရုံကအရမ်းကိုသာယာလှပတဲ့င်နှင့်သင်ယခုတိုင်အောင်ယူအေအီးမှဖူးကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်စိတ်ကူးမရနိုင်တော့တဲ့အမြင်အားဖြင့်ငါတို့သည်အတွက်အရှိန်မြှညာဘက်ပြီးနောက်, စိမ်းလန်းစိုပြေစိမ်းလန်းသောဥယျာဉ်နှင့်အသင်္ချေရေကူးကန်ခံစားခဲ့ရနိုငျသညျ။
တစ်လန်းဆန်း spa သင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်ကျနော်တို့အပြင်ဘက်မှခေါင်းနှစ်လုံး ... အဲဒီမှာသဲခုံ၏ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပွားညာဘက်ဟိုတယ်ရဲ့ရေကူးကန်ပြီးနောက်ဖြစ်ပြီးငါဆိုသည်ကားရမယ်, ငါသဲလွန်းလှသောကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းစိတ်ကူးရှိတယ်ဘယ်တော့မှ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယောင်းတိုင်အလင်းညစာစားပွဲမှဦးတည်ခြင်းမပြုမီ, ငါတို့ ... ဧရာ chessboard ပေါ်မှာငါတို့ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေစမ်းသပ်ပြီးနှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သားအဘို့ပြုရမည်ကိုစာရေးတံရှိခဲ့သည်! အသေးစားလေးတွေ trampoline စသည်တို့ကိုနှင့်အတူမိုးလုံလေလုံ kiddie ဧရိယာပြင်ပကစားဧရိယာပျော်မွေ့နိုင်ပြီးအကြီးအကဲတစ်ဦးလေးတွေနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်များများလွန်းလေကြောင်းဟော်ကီ, စားပွဲတင်တင်းနစ်, ကြက်တောင်တရားရုံးစတာတွေနဲ့တူရဲ့, များစွာသောစွန့်စားမှုအားကစား option ကိုရှိပါတယ်တူသောရရှိနိုင် quad စက်ဘီး, sandboarding, ကုလားအုတ်စီး ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ သငျသညျအနညျးငယျအရွယ်ရောက်လေးတွေရရှိပါသည် အကယ်. မိသားစုစွန့်စားမှု packages များစာရင်းထဲကနေရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် & သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဒူဘိုင်းအတွက် Amazing ညနေပိုင်း
ညဦးယံ၌အေးမြသောသဲတစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အပြီးကျနော်တို့အသင်္ချေရေကူးကန်ထဲမှာရေကူးဘို့အသွားဖို့ရွေးချယ်ကျနော်တို့သေးအဖြစ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခံစားမဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ Layali တရားရုံးသွားပြီးတိုက်ရိုက်ဝမ်းကခုန်ပျော်မွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် (အလုပ်ချိန်နာရီ, 8 pm တွင်စတင်သည် နေ့စဉ်) နှင့် tanoura ကခုန်ပွဲများ (ဒီထဲမှာနေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည် ဟော်တယ် အရာလည်းရှိ) အမှုဆောင်နေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကရင်ခုန်စရာညစာအတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် ... သူတို့သည်သင့်2ရွေးချယ်စရာများကိုပေးစွမ်းသင်ကအခန်းထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သို့မဟုတ်သင်ဘူဖေးခန်းမထဲမှာခံစားနိုငျရသော်လည်းကောင်း (ကြှနျုပျတို့ရှုပ်ထွေးရှောင်ရှားရန်အဆုံးစွန်ကို ရွေးချယ်. ) သက်သတ်လွတ်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ဦးအမျိုးမျိုးအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ် မဟုတ်တဲ့ veg သကဲ့သို့, သုပ် & အချိုပွဲအံ့သြဖွယ်များမှာ! Plus အားသငျသညျ (ကြှနျုပျတို့ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ထားတဲ့အထုပ်ထဲမှာ) သင့်ရွေးချယ်မှုနီသို့မဟုတ်နှင်းဆီဝိုင်တစ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
ဒါဟာ ... မှတ်မိဖို့နေခဲ့ဟင်နရီ Wadsworth ထံမှကဗျာ၏လိုင်းများနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်ငါအာရေဗျသဲတစ်ရင်ခုန်စရာနေထိုင်မှတ်မိမယ်!
ပူပြင်း clime ထံမှအနီရောင်သဲတစ်လက်တဆုပ်စာ,
ဘယ်နှစ်ယောက်ထူးဆန်းတဲ့ vicissitudes မမြင်စဖူး,
အဘူဒါဘီအဓိကမြို့မှ 250 ကီလိုမီတာပတ်လည်မှာဖြစ်ပါတယ် Liwa အိုအေစစ်, အကျယ်အတွက် 650,000km အားဖြင့်အရှည်1,000km²နှင့်အစီအမံ 500km ၏ဧရိယာကျော်တိုးချဲ့။ ဒါဟာသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်ဆော်ဒီအာရေဗျ, အိုမန် & ယီမင်ရှိပါတယ်
Liwa ၏အိုအေစစ် (ထိုဗာနိ yas အနွယ်) တွင်နေသောဘက်ဒိုဝင်ရလဒ်အဖြစ်ကျေးရွာများနှင့်အခြေချနေထိုင်မှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက် 15th နှင့် 16th ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကာလအတွင်း Liwa အတွက်ထင်ရှားရက်စွဲများမွေးမြူဖို့, မြေအောက်ရေချိုပြန်လည်ကုပုတ်နဲ့။ Liwa ပုခဲ့ အဆိုပါ Nahyan မိသားစု၏မွေးရပ်မြေပြန်ဖြစ်လျှင်, ဗာနိ yas အနွယ်၏ဦးဆောင်မိသားစုခဲ့သည့်အဘူဒါဘီနှင့်ယူအေအီး၏, လက်ရှိအာဏာရမိသားစု
Follow: Samriddhi Bajpai ရှက်